Iincwadi eziphambili ze-Sharpe (kunye nezinye iingcebiso ezifanayo)
Amanveli e-Sharpe Cornwell adibanisa i-adventure, ubundlobongela kunye nembali ukuba ibe nempembelelo efanelekileyo. Ekuqaleni uchungechunge malunga neBrithani Rifleman uRichard Sharpe ngexesha leMpi yaseNapoleonic, i-prequels ithathe iqhawe laseIndiya, ngelixa elinye iqhinga lokulwa emva kwemfazwe libandakanya intlanganiso enkulu yaseNalleon yaseSalpe kunye nokulwa eChile. Olu luhlu oluzimeleyo lweencwadi zam ozithandayo ze-Sharpe, ezinezinto ezinxulumene nazo.
I-1809. Emva kokufakazela iSouth Essex ilahlekelwa imibala kwiFrentshi, i-Sharpe ikhuthazwa okwesikhashana ibe ngumphathi kwaye inikwe umyalelo we-South Essex. La majoni aluhlaza adinga ukuqeqeshwa kulwa oluzayo, kodwa u-Sharpe unezinye izinto engqondweni yakhe: isithembiso asenza kwijoni elifa, ukuba ubuyisele imbeko yakhe entsha ngokubamba umgangatho we-Eagle yaseFrench.
Inkemba ka Sharpe
1812. Akusikho kuphela uKaputeni Sharpe okhokela inkampani yakhe elula kwiindawo ezininzi zokuhlaselwa, naye ulandele igosa leGosa eliPhezulu loMkhosi eliphinde lizingele inhloli yaseBrithani. Nangona isilonda esichukumisayo esicatshulwa kwi-protagonist ephambili, izinto zifikelela kwisigqibo kwi-Battle of Salamanca.
1812. Ngoku i-Major, i-Sharpe ihamba nomkhosi omncinci olwa nabaphangi abaye bathatha abathunjiweyo baze baxhomekeke kwinqaba, kodwa iqhawe lethu lijongene nokuhlaselwa kwebhola elikhulu laseFransi. Le ncwadi ayikho nje kuphela i-Obodiah Hakeswill, intshaba ebizwa ngokuba yintsikelelo, ibonisa kwakhona ukubonakala kokuqala kwe-rocket.
Inkampani ye Sharpe
1812. Emva kokunceda isiqhwithi uCuffidad Rodrigo, uSharpe ulahlekelwa yithuba lakhe elifutshane njengomphathi wecala aze azimisele ukuphinda aphinde aphinde afune ukuzithemba ngokuzibhokoxa ekukhuselweni kweBadajoz, umonakalo onobuqili oqala ngesiFrentshi ukukhusela i-citadel kwaye iphetha ngeNgesi. ngokuphanga kakubi.
1810. Ngomkhosi wesiNgesi unqwenela imali, iWellington ithumela u-Sharpe ukuba athathe i-fortune ngegolide esuka kwinkokheli yama-Spanish. Ngaphandle kokugxininiswa kwiimfazwe ezinkulu kunamanye amabhuku, le nto ibonisa ukuba i-adventure ye-style ye-adventure ishintsho kwisantya esivela ngasentla.
1809. Kubhalwe njenge-prequel, kwiminyaka emininzi le ncwadi yayiyincwadi yokuqala, ibali leendlela amaqela angamaqhwenga kunye neziSpeyin akwazi ngayo ukunqumla idolophu kunye nokuqala ukuvukela.
Regpe ye Sharpe
1813. Kwesinye sezicatshulwa 'iziqendu ezingaphezulu, u-Sharpe noHarper babuyela eNgilani befuna ukuqiniswa kwegesi yabo. Bafumanisa, ngokubhala ngokufihlakeleyo, ukuba umntu uthengisa amajoni akhe ...
1815. Emva kokuba athathe uSharpe ngaphesheya kwePortugal, eSpain aze eFransi, uBernard Cornwell kwafuneka ukuba abhale iqhawe lakhe kwi-Battle of Waterloo kunye nexesha layo lembali. Ngokuqinisekileyo enye yeyona nto ibhetele kulolu chungechunge, oku kufuneka kube ngowokugqibela owake wawafunda, ushiya i-Sharpe emva kweyure efanelekileyo.
I-Sharpe Companion nguMark Adkin
Ngomhla wokushicilela oku kwakuyisikhokelo esipheleleyo kwiincwadi ze-Sharpe: izahluko zachaza isicwangciso ngasinye, zifake iziganeko zibe yimixholo emitsha yembalo-mlando, izixhobo kunye nomfaniswano zachazwe, iiprojographic mapped and a fascinating snippets yembali yangempela emacaleni. Nangona kunjalo, uBernard Cornwell ususela kwiincwadi ezintsha ezibhaliweyo. Nangona kunjalo, oku kusenokufundwa kakhulu kubalandeli bomlingiswa.
I-Sharpe Boxset epheleleyo
Ngama-1990 iincwadi ezikhoyo ze-Sharpe zatshintshwa zibe yiminiselo engama-90 engqamana ne-Sean Bean. Akazange afane neenkcazo zeencwadi, kodwa uSean waba nguSharpe ogqibeleleyo, wada watshintsha umfanekiso kaBernard Cornwell wesimo sakhe. Ndiyacetyiswa ngomoya weshumi elinesithathu kulezi filimu (ndicinga ukuba ubulungisa bukaSharpe bubuhlwempu), kodwa kukho iinguqulelo zenguqu.
I-Shred of Honor kaDavid Donachie
Kwaye ngoku ndihamba ngokugqithiseleyo ngokukhankanya nabanye ababhali ongayithanda ukuba uyithandile into endiyincome ngasentla. I-David Donachie kaMarkham we-Marines chungechunge iqala ngemfazwe yesiFulentshi yemfazwe, eyaba yiMfazwe yamaNapoleon, kwaye ndandiyithanda kakhulu: i-angle ehlukileyo kodwa i-flavour. Andizange ndibafunde ngokulandelelana kwaye akukho micimbi.
Inkosi Yomkhosi Yenene nguAdrian Goldsworthy
Ewe, lo ngu-Adrian Goldsworthy ofanayo njengengcamango yembali yamandulo yamasosha, kodwa ukhethwa ukuba abeke uludwe lweenveli kwiimfazwe zaseNapoleon. Bahlula uluvo, abanye bebabona njengengqondo yoluntu kunye nobungqingili ngaphezu koSharpe, kodwa ngexabiso lesibini elisezantsi, bafanelekile ukuzama. Le ncwadi yodwa kwimixholo kwaye ilandela iBritish.
Phezu kweeNtaba kunye nokude: I-Music of Sharpe
Nangona olu luhlu lukhokhiswa njengeziphakamiso zam ndizifakile ngenxa yenani elithembekileyo labantu endiyazi ukuba ngubani oya kuyo emva kokubona uchungechunge lweTV kwaye walithanda, umculo ophefumlelweyo kunye nakwixesha. Akuzange kulungele ngokupheleleyo kum, kodwa bekuyiminyaka elishumi edlulileyo kwaye kufuneka ndibuye ndibuye.
I-Waterloo: Iintsuku Ezi-4 ezatshintshisa iYurophu yokuqothulwa nguTim Clayton
Inqaku eliyinyani, kodwa ukuba ufuna ukufunda imbali yangempela yenkqutyana yoqobo lwe-Sharpe uchungechunge ngaphezu kwalowo oza kuwufunda. Kufana nenveli kwaye inemininingwane eninzi kodwa ingalahlekelwa yinto ekukuthathele kuyo iziganeko kwaye ikunike ingqiqo yento elwa nayo.
Uluhlu lokuFunda lweeNtsana kwiintsana ezincinane
Igalari yefoto: Imifuno ye-Dogwood Blooms
Ngaba Zibalele Njani AmaDonsaurs Ukufunda Ukuza?
Amanani kwiLizwi 2003